အလုံမြို့နယ်၊ Hill Top Vista Condo ရှိ ငှားရန်ရှိသောအခန်းမှာ စတုရန်းပေ (1880) ကျယ်ဝန်းပြီး 3Master Bedrooms, Fully Furnished, ပါကေးစသည်ဖြင့်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။…...
အလုံမြို့နယ်၊ Hill Top Vista Condo ရှိ ငှားရန်ရှိသောအခန်းမှာ စတုရန်းပေ (1880) ကျယ်ဝန်းပြီး 3Master Bedrooms, Fully Furnished, ပါကေးစသည်ဖြင့်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။…
Listed 20 June 2019
Property ID: S-1201149
Mobile no : 01523232, 09250087887, 09250086345,
Office no : 09448003322, 09250087887
ငှားရန် - အလုံမြို့နယ်၊ Shwe Zabu River View Condoရှိ…
အလုံမြို့နယ်၊ Shwe Zabu Dake Condo ရှိ ငှားရန်ရှိသောအခန်းမှာ စတုရန်းပေ (2383) ကျယ်ဝန်းပြီး 2Master Bedrooms, 2Single Bedrooms, Fully Furnished, ပါကေးစသည်ဖြင့်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။…...
အလုံမြို့နယ်၊ Shwe Zabu Dake Condo ရှိ ငှားရန်ရှိသောအခန်းမှာ စတုရန်းပေ (2383) ကျယ်ဝန်းပြီး 2Master Bedrooms, 2Single Bedrooms, Fully Furnished, ပါကေးစသည်ဖြင့်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။…
Property ID: S-1201148
ငှားရန် - စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ဖျာပုံလမ်းရှိ…
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ဖျာပုံလမ်းရှိ ငှားရန်ရှိသော အခန်းမှာ စတုရန်းပေ (1250) ကျယ်ဝန်းပြီး 1Master Bedroom, 1Single Bedroom, Fully Furnished, ပါကေးစသည်ဖြင့်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။…...
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ဖျာပုံလမ်းရှိ ငှားရန်ရှိသော အခန်းမှာ စတုရန်းပေ (1250) ကျယ်ဝန်းပြီး 1Master Bedroom, 1Single Bedroom, Fully Furnished, ပါကေးစသည်ဖြင့်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။…
Property ID: S-1201122
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ Grand Sayar San Condo ရှိ ငှားရန်ရှိသော အခန်းမှာ စတုရန်းပေ (1684) ကျယ်ဝန်းပြီး 2Master Bedrooms, Fully Furnished, ပါကေးသသည်ဖြင့်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။…...
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ Grand Sayar San Condo ရှိ ငှားရန်ရှိသော အခန်းမှာ စတုရန်းပေ (1684) ကျယ်ဝန်းပြီး 2Master Bedrooms, Fully Furnished, ပါကေးသသည်ဖြင့်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။…
Property ID: S-1201115
ငှားရန် - Factory Rent and Sale in Thilawar (ID-404)
Factory for rent and sale in Thilawar Industrial Zone, Thanlyin. Land area –2Acres Factory area – 52312 sqft , has 250 KVA Transformer. Monthly rent price – 165 Lakh (Nego) Sale price – 18000 Lakhs (Nego) Factory Rent and Sale in Thilawar (ID-404) We can do negotiate on that Above mentioned…...
Factory for rent and sale in Thilawar Industrial Zone, Thanlyin. Land area –2Acres Factory area – 52312 sqft , has 250 KVA Transformer. Monthly rent price – 165 Lakh (Nego) Sale price – 18000 Lakhs (Nego) Factory Rent and Sale in Thilawar (ID-404) We can do negotiate on that Above mentioned…
Property ID: S-1201047
Asking Price : 165 သိန်း
ငှားရန် - ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ကြားရိပ်သာလမ်းရှိ…
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ကြားရိပ်သာလမ်းရှိ ငှားရန်ရှိသောကွန်ဒိုမှာ စတုရန်းပေ ( 1500 ) ကျယ်ဝန်းပြီး 1Master bedroom, 1Single bedroom, Fully…...
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ကြားရိပ်သာလမ်းရှိ ငှားရန်ရှိသောကွန်ဒိုမှာ စတုရန်းပေ ( 1500 ) ကျယ်ဝန်းပြီး 1Master bedroom, 1Single bedroom, Fully…
Property ID: S-1201014
ငှားရန် - NCR-015 မဟာန၀ရတ်ကွန်ဒိုတွင် (1800)sqft…
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (1800)Sqft ရှိပြီးရိုးရိုးအိပ်ခန်း(4)အဲယားကွန်း၊ ကြွေခင်း နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သည့်ကွန်ဒို…...
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (1800)Sqft ရှိပြီးရိုးရိုးအိပ်ခန်း(4)အဲယားကွန်း၊ ကြွေခင်း နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သည့်ကွန်ဒို…
Listed 13 June 2019
Property ID: S-1200668
ငှားရန် - NCR-014 ပြည့်ဝကွန်ဒိုတွင် (2000)sqft အကျယ်ရှိသောအခန်းအမြန်ငှားမည်။
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (2000)Sqft ရှိပြီးမာစတာအိပ်ခန်း(1)ခန်း၊ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(1)အဲယားကွန်း၊ပရိဘောဂ၊ ပါကေးခင်း…...
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (2000)Sqft ရှိပြီးမာစတာအိပ်ခန်း(1)ခန်း၊ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(1)အဲယားကွန်း၊ပရိဘောဂ၊ ပါကေးခင်း…
Property ID: S-1200663
ငှားရန် - NCR-008 Union Star Condo တွင် (1500)sqft အကျယ်ရှိသောအခန်းအမြန်ငှားမည်။
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (1500)Sqft ရှိပြီးမာစတာအိပ်ခန်း(1)ခန်း၊ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(2)အဲယားကွန်း၊ပရိဘောဂ၊ ပါကေးခင်း…...
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (1500)Sqft ရှိပြီးမာစတာအိပ်ခန်း(1)ခန်း၊ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(2)အဲယားကွန်း၊ပရိဘောဂ၊ ပါကေးခင်း…
Union Star Condo
Property ID: S-1200650
ငှားရန် - NCR-007 စည်တော်ကြီးကွန်ဒိုတွင်(3375)sqft…
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (3375)Sqft ရှိပြီးHall၊ ကြွေခင်း နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သည့်ကွန်ဒို ကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်…...
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (3375)Sqft ရှိပြီးHall၊ ကြွေခင်း နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သည့်ကွန်ဒို ကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်…
Property ID: S-1200647
ငှားရန် - NCR-006 စမ်းချောင်း Garden ကွန်ဒိုတွင်…
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (2400)Sqft ရှိပြီးမာစတာအိပ်ခန်း(1)ခန်း၊ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(2)အဲယားကွန်း၊ပရိဘောဂ၊ ပါကေးခင်း…...
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (2400)Sqft ရှိပြီးမာစတာအိပ်ခန်း(1)ခန်း၊ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(2)အဲယားကွန်း၊ပရိဘောဂ၊ ပါကေးခင်း…
Property ID: S-1200645
ငှားရန် - NCR-001 KBZ Tower တွင် (1704Sqft) အကျယ်ရှိသောကွန်ဒိုအမြန်ငှားမည်။
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (1704)Sqft ရှိပြီးမာစတာအိပ်ခန်း(2)ခန်း၊ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(1)အဲယားကွန်း၊ပရိဘောဂ၊ ပါကေးခင်း…...
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (1704)Sqft ရှိပြီးမာစတာအိပ်ခန်း(2)ခန်း၊ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(1)အဲယားကွန်း၊ပရိဘောဂ၊ ပါကေးခင်း…
Property ID: S-1200574
ငှားရန် - လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းရှိ…
လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းရှိ ငှားရန်ရှိသော ကွန်ဒိုမှာ စတုရန်းပေ (900) ကျယ်ဝန်းပြီး 1Master bedroom, 1Single bedroom, Fully Furnished,…...
လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းရှိ ငှားရန်ရှိသော ကွန်ဒိုမှာ စတုရန်းပေ (900) ကျယ်ဝန်းပြီး 1Master bedroom, 1Single bedroom, Fully Furnished,…
Property ID: S-1200594
ငှားရန် - လှိုင်မြို့နယ်၊ ပါရမီလမ်းရှိ…
လှိုင်မြို့နယ်၊ ပါရမီလမ်းရှိ ငှားရန်ရှိသော ကွန်ဒိုမှာ စတုရန်းပေ (1875) ကျယ်ဝန်းပြီး 2Master bedrooms, 1Single bedroom, Fully Furnished, ပါကေးစသည်ဖြင့်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။…...
လှိုင်မြို့နယ်၊ ပါရမီလမ်းရှိ ငှားရန်ရှိသော ကွန်ဒိုမှာ စတုရန်းပေ (1875) ကျယ်ဝန်းပြီး 2Master bedrooms, 1Single bedroom, Fully Furnished, ပါကေးစသည်ဖြင့်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။…
Property ID: S-1200592
ငှားရန် - 1 Bedroom River View Penthouse for rent in Bo Galay Zay Street near Union Bar,…
1 Bedroom River View Penthouse for rent in Bo Galay Zay Street near Union Bar, 1 Bedroom Fully Furnished will be provide Yangon River View Good Natural Top Floor with Lift Walking Distance to Sule Pagoda 650 USD per month for Fully Furnished ...
1 Bedroom River View Penthouse for rent in Bo Galay Zay Street near Union Bar, 1 Bedroom Fully Furnished will be provide Yangon River View Good Natural Top Floor with Lift Walking Distance to Sule Pagoda 650 USD per month for Fully Furnished
Property ID: S-1200422
ငှားရန် - Very Bright&Clean;2Bedrooms apartment near Thuwana Aung San Stadium,with Back…
Very Bright&Clean;2Bedrooms apartment near Thuwana Aung San Stadium,with Back Up Generator;5 minutes drive to Yankin ▶️2 Master Bedrooms with Good Natural Light ▶️ Bright & Good Size Living Room ▶️ 24 Hrs Back Up Generator ▶️ 24 Hrs Security ▶️ Dedicated Car Park ▶️ Balcony…...
Very Bright&Clean;2Bedrooms apartment near Thuwana Aung San Stadium,with Back Up Generator;5 minutes drive to Yankin ▶️2 Master Bedrooms with Good Natural Light ▶️ Bright & Good Size Living Room ▶️ 24 Hrs Back Up Generator ▶️ 24 Hrs Security ▶️ Dedicated Car Park ▶️ Balcony…
Yeik Tar St
Property ID: S-1200411
ငှားရန် -3Bedrooms apartment in Yankin Township.Fully Furnished for 700 USD per month
3 Bedrooms apartment in Yankin Township.Fully Furnished for 700 USD per month - 1 Master Bedroom and2Single Rooms - Fully Furnished - Walking Distance to Yankin Centre - Good Natural light 700 USD/month...
3 Bedrooms apartment in Yankin Township.Fully Furnished for 700 USD per month - 1 Master Bedroom and2Single Rooms - Fully Furnished - Walking Distance to Yankin Centre - Good Natural light 700 USD/month
Yan aung St
Property ID: S-1200380
ငှားရန် - For Rent@Expats' Favourite Yaw Min Gyi Area Apartment,3 Bedrooms with Natural…
For Rent@Expats' Favourite Yaw Min Gyi Area Apartment,3 Bedrooms with Natural Light,Nice Kitchen Yangon For Rent@Expats' Favourite Yaw Min Gyi Area Apartment,3 Bedrooms with Natural Light,Nice Kitchen 1500sqft Size in Expats' Favourite Yaw Min Gyi Area ▶️1 Master Bedroom and2Single Rooms ▶️Very…...
For Rent@Expats' Favourite Yaw Min Gyi Area Apartment,3 Bedrooms with Natural Light,Nice Kitchen Yangon For Rent@Expats' Favourite Yaw Min Gyi Area Apartment,3 Bedrooms with Natural Light,Nice Kitchen 1500sqft Size in Expats' Favourite Yaw Min Gyi Area ▶️1 Master Bedroom and2Single Rooms ▶️Very…
Property ID: S-1200379
ငှားရန် - Condo Rent in Kamaryut (ID-883)
1350 sqft condo area for rent in Kamaryut Township. Condo has Living-room, One Master Bed-room, Two Single Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Asking Price – 10 Lakh (Nego) Condo Rent in Kamaryut (ID-883) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking…...
1350 sqft condo area for rent in Kamaryut Township. Condo has Living-room, One Master Bed-room, Two Single Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Asking Price – 10 Lakh (Nego) Condo Rent in Kamaryut (ID-883) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking…
Property ID: S-1200366
ငှားရန် - Condo Rent in Kamaryut (ID-885)
1456 sqft condo area for rent in Kamaryut Township. Condo has Living-room, One Master Bed-room, Two Single Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Fully furnished condo. Asking Price – 12 Lakh (Nego) Condo Rent in Kamaryut (ID-885) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property…...
1456 sqft condo area for rent in Kamaryut Township. Condo has Living-room, One Master Bed-room, Two Single Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Fully furnished condo. Asking Price – 12 Lakh (Nego) Condo Rent in Kamaryut (ID-885) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property…
Property ID: S-1200362